EACCESS (permission deniend) - MYSTERY ZILLION
EACCESS (permission deniend)
(database query က index ရပြီးနောက်ပိုင်း)
assets folder ကနေ app's private external storage directory အောက်ထဲ copy ကူးတဲ့အခါ emulator ( api 25 and 22) နဲ့ phyiscal device (api 25 and 23) တွေမှာ ဘာမှ မဖြစ်ပေမယ့် cherry mobile (api 19 kikat) မှာ နဂိုက error မတက်ပေမဲ့ ခု EACCESS (permission deniend) ဆိုပြီး error သွားတယ်။
doc ထဲမှာ api 19 and above အတွက် မလိုဘူးလို့လည်း ပြောပြီးသားကိုး
Beginning with Android 4.4 (API level 19), reading or writing files in your app's private external storage directory—accessed using getExternalFilesDir()—does not require the READ_EXTERNAL_STORAGE or WRITE_EXTERNAL_STORAGE permissions.
manifest ထဲ permisson ကတော့ အောက်ကအတိုင်း ပေးထားတယ်။
နဂိုက ရပြီး code တလုံးမှ မပြင်ဘဲ မရတော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
အဲဒါနဲ့ stackoverflow ထဲ လျှောက်ဖတ်ပြီး targetsdk ကို 22 ကို ပြောင်းလိုက်တော့ ရသွားတယ်။
နောက်တခါ targetsdk ကို နဂိုကအတိုင်း 27 ပြန်ထားလိုက်တယ်။
error မတက်တော့ဘဲ ပြန်ရနေပြန်ရော။
အဲ့တာ ဘယ်လိုကြောင့်များပါလိမ့်။ ........
ဆိုပြီး အသုံးပြုနေကြပါ။ EACCESS permission denied ကို ဘယ်အချိန်မှာ တတ်တာလဲ ? File write သည့် အခါမှာ ဘယ်နေရာမှာ သွား write ထားပါသလဲ ?
getExternalFilesDir() နဲ့ ရလာတဲ့ path မှာ copy ကူးတာပါ။ မကူးခင် database ဆိုတဲ့ folder အရင်ဆောက်လုပ်သေးတယ်။
folder ဆောက်ချိန်မှာ error တက်လာတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောထားသလိုဘဲ အရင်က error မတက်ဘဲ ခုမှ တက်။
targetsdk ကို 27 ကနေ 22 ပြောင်းလိုက်တော့ error မတက်တော့။
ပြီးတော့ targetsdk ကို 27 ပြန်ပြောင်းကြည့်တော့ error က မတက်တော့ပြန်ဘူး
saturngod စကားမစပ် rabbit converter ကို issue ပေးထားသေးတယ်။
pndaza Gradle ​ကြောင့်လည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အလုပ်လုပ်သွားရင်တော့ ကိစ္စ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ xcode မှာတော့ မရတော့ ရင် xcode ကို restart ချလိုက်ရင် သူ့အလိုလို ရသွားတာတွေ ရှိတတ်တယ်။ android studio ပြဿနာ ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
rabbit က bug fixed လုပ်ပြီးပါပြီ။ ကျေးဇူးပါ။